कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुने संकेत पाएपछि वार्ताबाट भाग्दै मोदी ! « Media for all across the globe
नेपालमा थप ५ काेराेना संक्रमितकाे मृत्यु
मुम्बईबाट नेपाल पुगिन् अभिनेत्री मनीषा कोइराला
कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुने संकेत पाएपछि वार्ताबाट भाग्दै मोदी !
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समाधान गर्न नेपालले भारतीय पक्षलाई बारम्बार ताकेता गर्दापनि कुनै ठोस जवाफ आएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले संवादका लागि तीन पटक कुटनीतिक नोट पठाउदाँ समेत भारतले आजसम्म वार्ताका लागि मुख खोलेको छैन। नेपालसँग तथ्यगत प्रमाणहरु भएपछि भारत वार्तामा बस्न नचाहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। पछिल्लो समय नेपाल–भारत सीमा विवाद सहतमा आएको छ।
नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा वार्तामार्फत एतिहासिक प्रमाणहरु पेश गरेर भारतीय अतिक्रमण हटाउँन चाहान्छ। भारतले सामरिक रुपले महत्वपूर्ण मानेको यो भूमि सहजै छाड्न मानेको छैन। भारतीय राजनीतिक र कुटनीतिक बृत्तमा समेत नेपालसँग बलिया प्रमाणहरु रहेको चर्चा हुने गरेको छ। भारतीय परिदृश्यले समेत स्पष्ट हुन्छ कि – उ हारको मानसिकतामा बाँचिरहेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नोपाल–भारत जानकार तथा सीमा विज्ञहरुसँग समेत छलफल गरेको बताइन्छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजानुपर्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री मोदी वार्ताबाट भागिरहेका छन्। छिमेकीहरुबाट चौतर्फीबाट घेरिएको भारत कहिलेसम्म वार्ताबाट भाग्ला?